Mwakpo Dapchi: A gbara ndịagha Naịjirịa ama - Amnesty - BBC News Ìgbò
Mwakpo Dapchi: A gbara ndịagha Naịjirịa ama - Amnesty
Nkenke aha onyonyo Ụmụakwụkwọ nọ na Dapchi karịrị 900
A gbara ndịagha Naịjirịa ama na ndịagha Boko Haram nọ nso obodo Dapchi mana ha azaghị, nke nyere ndị omekome a ohere ịtọrọ ụmụakwụkwọ 110 ne-enweghị onye jụrụ ha ese, ka ndị Amnesty International kwuru ụnyaahụ.
Ntọ a atọrọ ụmụakwụkwọ Dapchi dị afọ 11 ruo 19, yiri ụdịrị ntọ ndị Boko Haram mere n'afọ 2014 n'obodo Chibok, ebe ha nwụchiri ụmụakwụkwọ 276.
Mwakpo Dapchi bụ ezigbote nsogbu banyere onyeisiala Naịjịrịa bụ Muhammadụ Buhari bụ onye batara n'ọchịchị maka nkwa o kwere na ọ ga-ebuso ndi Boko Haram agha karịa etu onye chịbụrụ Naijirịa bụ Goodluck Jonathan siri mee.
Mwakpo Dapchi: Ụmụakwụkwọ 110 na-efu
Ntọrọ Dapchi: Ewepụtala Kọmitii nyocha
Ndị mụrụ ụmụakwụkwọ Dapchi wuchiri Abuja
"Ndị na-achị Naịjirịa dara n'ọrụ nchekwa ọha, etu ha siri daa ya na Chibok afọ anọ gara aga," Osai Ojigho bụ onyeisi Amnesty International na Nigeria kwuru n'akwukwọ ha zipuru.
"Agbanyeghị na a gwara ha ugboro ugboro na Boko Haram nọ n'ụzọ Dapchi, o dị ka ndị uweojii na ndịagha emeghị ihe ọbula iji gbochie ntọrị a," Ojigho kwuru.
Otu onye na ekwuchitere ndịagha Naijirịa gọrọ na ha nwetara ama maka Boko Haram ịnọ na gburugburu Dapchi, na-asi: "Onweghị ihe dịka ihe ahụ ha na-ekwu."
O kwuru na ọbụru na Amnesty nwere ozi dị mkpa dika ụdịrị a, ha kwesịrị ime ka ndị onyeisiala họpụtara ka mberede Dapchi mere mata.
Nkenke aha onyonyo Ndị nwe ụmụaka Dapchi na-efu efu nọ na-atụ anya ha
Ndị Amnesty na-ekwu na ndịagha Nigeria na ndị uweojii nwetara ozi ugboro ise na Boko Haram na-abịa Dapchi n'ekwentị, elekere anọ tupu ha awakpoo obodo ahụ, mana ha emeghị ihe ha kwesịrị ime iji gbochie ha, maọbụ mee ka a zọpụta ụmụakwụkwọ ahụ ka atọọrọ ha.
"Ndịagha Naịjirịa wepụrụ ndị agha n'ebe ahụ na Jenụwarị, nke mere na ndị nchekwa kwesịrị ịhụ maka obodo ahọ nọtere aka na Dapchi," Akwụkwọ Amnesty kwuru.
Ka otu ọnwa gara, onweghị onye ma ihe mere ụmụaka a.
Nkenke aha onyonyo Mgbe awakporo ụlọakwụkwọ na Dapchi, ụfọdụ gbabara ọhịa
Nne na nna ha na ndị ọchịchị ekwugbeghị ma ha anụla ihe ọbụla gbasara ma ụmụakwụkwọ a adị ndụ. N'ọzọ, ụmụaka apụtabeghị n'ihe onyonyo ndị Boko Haram.
"Ndị ọchịchị Naịjirịa kwesịrị inyocha ihe mere ka ndị Boko Haram nweta ohere tọrọ ụmụaka, na ihe mere ejighị gbaa mbọ ka egbochie ya," Ojigho kwuru.
Onyeisiala Naịjirịa bụ Muhammadu Buhari kwuru n'izuụka gara aga na o nyela iwu ka ndị nchekwa niile chọwa ụmụaka a, ma ṅụọ iyi na gọọmentị agaghị ezu ike ma ọ bụrụ na agbapụtaghị ha.
Buhari kwukwara na ya ga akparịta ụka iji gbapụta ha, nke gosiri na ndịagha nwere ike ịda n'ịchọta ụmụakwụkwọ Dapchi a.